Unokuhlangabezana njani noMnyaka omtsha 2017 we-Rooster ukuze uphile ngokuzonwabisa kunye nobutyebi (iskripthi, intengiso, imenyu)
Ngo-Eva onguNyaka omtsha, sithembela kunamandla omlingo size silindele ukuba bafake isandla kwimpumelelo yethu. Kule nto, sithatha isibheno kumashishini asempuma zonyaka, ukutya ukutya kwabo kunye neengxowa zabo. Ngo-2017, kuya kufuneka senze into eqaqambileyo, encinci, kodwa kuyo yonke i-Cock Cock. Ngaba kuya kunzima ukukholisa umnonophelo oqhelekileyo kwiholide yendabuko? Akunjalo! Into ephambili kukuba ulungelelanise izenzo zakho kunye nendawo yokuhlala yintaka yasekhaya, kwaye ungaphikisani nemithetho apho yonke imiqondiso ye-horoscope yasempuma iphantsi.
Imiba, indlela yokuhlangabezana noMnyaka omtsha we-2017 Cock ukuze uphile ngokucebile kwaye ngononophelo
Kukho iironons ezithile ezimele zigcinwe ekulungiseleleni umthendeleko kunye nentlanganiso yonyaka we-Rooster. Ukuqinisekisa ukuba wena nolwasekhaya ulonwabo, ubutyebi, impilo, impumelelo nothando, uhambelana nemimiselo ehambelana nomlingani nendlela yokuphila yomnini wonyaka.
Umgaqo wokuqala nokuphambili: ukuhlangabezana noMnyaka omtsha kwisangqa sezihlobo nabahlobo. I-rooster yintaka yasekhaya ekhethekileyo, iyalondoloza kwaye ihlonela amasiko entsapho. Uya kubaphazamisa abo bahlonela izithethe zentsapho baze babeke iimfuno zabo ngaphezu kwazo. Kodwa ukuba kwenzeka ntoni ukuba uceba ukuchitha u-Eva unyaka omtsha kwinqanaba eliphakathi kweso sixeko, kwiklabhu ephathekayo, kwi-carnival discotheque okanye kwi-Maldives, kuya kufuneka uthathele intsapho kunye nawe, ukuze ungabi nomsindo nge Cock engaqinisekisiyo.
I-rooster ngummeli oqaqambileyo kwaye okhohlakeleyo we-horoscope yasempuma, ngoko ayikunyamezeli ukukhwabanisa, i-monotony kunye nesimo esiqhelekileyo. Zama ukubandakanya yonke ingcinga yakho. Yiba nobuchule ekudaleni nasekuphumezeni iimbono zokubhiyozela. Yiza ngeNkqubo entsha yoNyaka omtsha kunye nemincintiswano, i-lottery ejabulisayo kunye namabhaso-amahlaya okanye umnqweno wokufumana izipho. Ukuba uyakwazi ukumangalisa intaka evuthayo, ungakholelwa, akayi kukunceda ube nemihlali kunye neziganeko ezinomdla zonyaka.
Inhlanhla ngo-2017 iya kunikwa abo babonisa ububele. Hlanganisa nabahlobo bakho kunye neentsapho zothando. Ngo-Eva onguNyaka omtsha, bathengise izipho zezingane zezintandane, tyelela amakhaya abantu abadala kunye neendwendwe ezisebekhulile, baququzelele uncedo lwendawo yokuhlala yezilwanyana ezingenamakhaya. I-rooster iya kuxabisa ukunakekelwa kwabuthathaka, kuba yena ngokwakhe uchitha ubomi bakhe ekukhathaleleni ukuchuma kunye nokuhlelwa kwintando yakhe yenkukhu. Ukuba awuyi kugxininisa ngobubele bomphefumlo, umphathi wonyaka uza kukunika zonke iintlobo zeenzuzo. Kububele kwaye iphela inomusa!
Ukunyamekela ngokufanelekileyo ilungiselelo lendlu, apho uya kubhiyozela uNyaka omtsha. Ngomdla kufuneka kubekho zonke iinkcukacha: ngaphakathi, umthi, itafile, imenyu. Sebenzisa kwizinto zokutyebisa izinto zendalo kuphela, ezihambelana neskimu sombala ovuthayo kunye nokukhanya okukhanyayo okugqamile kwindlu yonke. I-Cock Cock ngokuqinisekileyo iya kuhamba kwiholide ekhanyayo kwaye, mhlawumbi, iya kuhlala idibana noNyaka Omtsha kunye nawe kwi-idyll.
Iskimu sombala kwiNtshukumo Yonyaka omtsha-2017
Umlilo womlilo, nangona umtsalane wemibala ekhanyayo, evuzayo, kodwa "ukukrazula" ingcamango embi kakhulu. Ngoko ke, usebenzisa umbala omlilo wombala kwizinto zokubongela izinto zangaphakathi, uhambelane nemilinganiselo kwaye ungaguquki umhlobiso kwi-pathos. Ukuhlobisa ingaphakathi, unikezele ngokupheleleyo ukucinga, kodwa ungakulibala ukulufanisa kunye nezikhetho ze-Rooster. Umbala ukhethe ngokubhekiselele kwipalayini yomlilo: i-terracotta, ibomvu, igolide, isanti, ilanga, i-orange, i-carmine. Kodwa ngokubomvu, qaphela, kuba iingcali ze-feng shui ziqwalasela ukuba lo mbala, ngokubhekiselele kwimimiselo yoMlilo, uya kwi-dissonance kunye nenye into - i-Metal. Ukulungiswa kwangaphakathi, khetha i-shadow shades ebomvu okanye ukulungelelanisa imihlobiso yemibala enegazi eneempawu ezimnyama kunye ezimhlophe. Kwakhona ungabandakanyi imibala emanqabileyo, ebomvu kunye nemisonto.
Xa ukuhlobisa indlu yaseRoster iyavuma ukugqithisa. Ingaba njenge-ultra-yesimanje, efanelekileyo kwaye ihlotshiswe ngokukhawuleza ngeempahla zegolide zehlobiso, kwaye ikhutshwe, kodwa ibe nomqondo wayo wesitayela selali. Kuya kulungele ukuhlobisa igumbi ngezinto eziphathekayo ngendlela yempahla yeenkuni kunye neeramic, izambatho zendalo, kunye neesonyi, izilwanyana ezinobungozi, ama-spikelets ezomileyo, iintlobo zengca kunye neentyantyambo. Qinisekisa ukuba usebenzisa kwimilinganiselo yoyilo yeentonga, iinkukhu kunye nezidleke zokuhlobisa iintlobo zeeqanda zegolide okanye iintambo zegolide ezenziwe ngegolide. Ukuhlobisa okunjalo kungenziwa ngezandla zakho. Ngale ndlela awuyi kugawula iRoster ngaphezu koko, kodwa gcwalisa indlu yakho ngamandla okudala.
Imenyu Yonyaka omtsha ye "Cock"
Ukwenza imenyu yetafile yonyaka omtsha, khumbula ukuba uphawu lwe-2017 luyintaka enesisa, kwaye ufuna itafile "iqhume" kwiindidi ezahlukeneyo. Okukhethiweyo kunikwa izitya ezivela kukutya, imifuno, iziqhamo kunye nemifuno - yonke into indlu yenyoni idla ukuyidla. Apha, njengoko usenokuba uqaphele, akukho nyama enokuthi i-Rooster iyakuthatha ngendlela ye-bugs-worms. Ewe, ukuba wena kunye neendwendwe zakho akubona abalandeli be-Asian cuisine kunye nazo zonke iintlobo zeenkumbi ezibiweyo, ngoko unako ukubeka endaweni yazo ngentlanzi, inkabi okanye ingulube. Kodwa akuvumelekanga ukukhonza inkukhu kunye namaqanda apheleleyo etafileni, kodwa akuvumelekanga ukuba uwasebenzise kumasaladi. I-Rooster ayinandaba namaqebelengwane. Bake amaqebelengwane amnandi, ii-pie kunye ne-alebyaki. Bayihlobise ngokufaka iifom ze-braids, i-spikes kunye nemizi. I-Rooster yasekhaya iyanamathela kwiinkcukacha kwaye iya kuvuya ngayo "ubucwebe" obunjalo.
Ukusela kunye needyuli
Qaphela ukuba kwiTheyibhile Yonyaka Omtsha kwakungekho kuphela imimoya yazo yonke imibala ekhoyo kunye nee-degrees. I-Champagne, i-liqueurs, i-tinctures, i-vodka, iwayini ebomvu neyemhlophe, eqinisweni, iimpawu ezibalulekileyo zantoni na, kodwa ngonyaka woNyaka phakathi kweziphuzo kufuneka zibe neenkwenkwezi ezimbala. Umnini wabo unyaka uya kulinda ngokukodwa, ingakumbi kuba igama elithi "cocktail" ngesiNgesi liguqulela "umsila womsila". Iikhocktails zingabinxila kunye ne dessert. I-cocktail esanda kuphuma kwiziqhamo kunye ne-berry juices kunye ne-ayisikrimu kunye ne-milk mixes, ayikwazi ukulungele kangcono iipesele zonyaka omtsha. Njengeesondlo, ukongeza kwii-pastries ezithambileyo, unokukhonza itafile yokutya kunye ne-jelly ebalabala kwiikomityi ezibonakalayo okanye i-marmalade eqaqambileyo. Ukutsalisa ubutyebi kwitafile yonyaka omtsha kufuneka kube njalo ibhaskiti yeziqhamo ezintle.
Iimpawu zokulungiswa kwetafile yonyaka omtsha-2017
I-Rooster, ewe, yinkwenkwe yelizwe, kodwa uyayithanda kakhulu i-chic kwaye ikhanya. Njalo phawula umbala oqaqambileyo kunye nokuzithemba, le ndoda enhle ithanda ukutsala ingqalelo. Mkhangele kunye nawe, udale umkhosi wokuzonwabisa. Ngomhla woNyaka omtsha sonke sichitha ixesha elide etafileni kwaye ngokuqinisekileyo amehlo ethu ayinamathelisi kuphela kwizinto zokutya, kodwa nezinto ezincinci eziye zenzelwe ukukhumbuza ukuba nguNyaka omtsha obhiyozelwayo. Ngako oko, ungazisoli ukuba amandla kunye nexesha letafile akugcini nje ukwanelisayo, kodwa kwinto enhle yokuNyaka omtsha. Imfuno ebalulekileyo yokuhlobisa itafile yendalo yempahla yonke.
Qala ngeetafile zeetafile kunye neetafile zetekisi. Iikhenkethi zelinen okanye isiliki (iitrato, i-napkins, ityhubhu) ingaba yimizimba yamandla okanye i-multicolored, kodwa imele imbala enqwenelayo ye-Rooster. Ewe, ukuba zihlotshiswe ngemihlobiso engumqondiso okanye zifakwe ngesandla. Izitya zikhetha i-porcelain, kunye nokwakha, ingilazi, udongwe okanye ukhuni, kodwa akukho ndlela iplastiki! Ukuhlobisa itafile ngezinto ezingaqhelekanga zokubumba kwindlela yokuNyaka omtsha, ngokuqwalasela inkcazo ye-Rooster. Ngokuchanekileyo kuya kubonakala kubakhweli beenkuni ezikhuniweyo kunye neengxowa zempahla, ezihlotshiswe ngetambo, iinaliti eziphambili zepine, amagatsha ama-berries omnyama, amasongo e-citrus omisiwe, iintonga ze-sinam ecikizekileyo, njl. Ukuhlobisa okuphambili kwetafile kuya kutsala umxholo weKrisimesi okanye i-wreath yeKrismesi ngaphakathi ngekhandlela. Itafile ezinjalo ziya kubonakala zizintlonelo kwaye zithokoze!
Kuya kuba yintoni ebusika 2014-2015, ukubikezela kwemozulu
Iimpawu eziphambili zoNyaka wokuSungulwa kweNtombi. Uyabona ntoni ngo-Annunciation? Izimpawu ezinomdla kunye neenkolelo ezinxulumene no-Annunciation
Imiqondiso yabantu kaDisemba
Iimpawu zabantu malunga nemozulu
Ukutolika kwamaphupha ngemini yeveki
Yintoni etshisa indlebe efanelekileyo?
IHoroscope yengonyama ngoJanuwari
Iibhisikidi ze-tshokoleta kunye ne-caramel kunye neentonga
Isalathiso somfazi emva kweminyaka engamashumi amane
U-Andrei Grigoriev-Apollonov wabangela umonakalo emva kokungcwaba kukaOleg Yakovlev, umfanekiso
I-Vareniki i-yogurt kwi-yogurt
Unyaka omtsha: izinto ezingama-30 zokwenza ngaphambi ko-2016
Indlela yokuphepha ukushisa ilanga ehlobo
Indodana kaSpartak uMishulin ithemba ukwenza abahlobo nodadewabo
Ukukhusela kuthetha ukuchasa ilanga
Ukulungiswa nokuhlaziywa kwendawo oyithandayo
Kuze kube nini umntwana adinga umqhubi?
I-Horoscope ngoNovemba ka-2017 - I-Cancer yaseTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Ikhekhelethi kunye neempahla zayo
Ubume bokugcina ubisi